उदय सोताङ्गको संगीत तथा आवाजमा ‘कहाँ बित्छ र जिन्दगी’ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper उदय सोताङ्गको संगीत तथा आवाजमा ‘कहाँ बित्छ र जिन्दगी’	उदय सोताङ्गको संगीत तथा आवाजमा ‘कहाँ बित्छ र जिन्दगी’ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper उदय सोताङ्गको संगीत तथा आवाजमा ‘कहाँ बित्छ र जिन्दगी’
उदय सोताङ्गको संगीत तथा आवाजमा ‘कहाँ बित्छ र जिन्दगी’
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९, सोमबार
काठमाण्डौ। गीतकार तथा साहित्यकार सर्जक शेखर ढुङ्गेलको शब्दमा ‘कहाँ बित्छ र जिन्दगी’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा उदय सोताङ्गको स्वर तथा संगीतमा रहेको छ।
लामो समयदेखि अमेरिका बस्दै आएका गीतकार ढुंगेलको यस गीतको भिडियो आर्टिस्ट नेपाल नेटवर्क प्रालिको ब्यानरमा तयार भएको हो। यस गीतको भिडियोमा रोशन सुबेदी, अपेक्षा खड्का र बालकलाकार सार्थ पण्डितको अभिनय छ। भिडियोमा गीतकार शेखर पनि आफैँ फिचार्ड भएका छन्।
प्रस्तुत गीतमा उदय सोताङ्गकै संगीत रहेको छ । सचिन सिंहको संगीत संयोजन तथा मित्र लामाको मिक्सिङ्ग रहेको यस गीतको म्युजिक भिडियोलाई निर्देशन नव ढुङ्गेलले गरेका हुन् भने छायांकन अमृत सुनुवार र सम्पादन माधब बेलबासेले गरेका छन् । आर्टिस्ट नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत सार्बजनिक गरिएको यस गीतलाई मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा निर्माण युनिट ढुक्क रहेको छ ।